China Cantaloupe mpanamboatra sy mpamatsy | Heritage
Voasary mena aty
Voankazo voankazo tsy ampy rano
Ny melon Hami vaovao dia avy amin'ny faritanin'i Xinjiang miaraka amin'ny vokatra Geographic Indication.
Mamy sy mahavelona ny Cantaloupe.
Ny sakafo lova dia mamokatra ny cantaloupe maina miaraka amin'ny voankazo vaovao avo lenta amin'ny alàlan'ny fandrobana mangatsiaka ao anaty syrup amin'ny hafanana ambany, hiantohana ny asidra sy ny tsiro manitra manokana sy miavaka.
Ny cantaloupe maina dia sakafo ara-pahasalamana mahasalama izay manankarena antioxidants, vitamina ary mineraly. Ny antioxidants amin'ny alàlan'ny cantaloupe maina dia manampy ny vatana hanala ny radika maimaim-poana izay mety hanimba ny sela salama.
Cantonoupe melon dia mamelombelona sakafo mahavariana amin'ny fahavaratra, ary misy otrikaina mety hahasoa ny olona iray.
Malaza amin'ny ankizy sy ny olon-dehibe, ny cantaloupe dia afaka mamorona tsindrin-tsakafo mamelombelona sy mahasalama ary mora amin'ny fahavaratra, raha ny habetsahan'ny rano avoakany kosa dia misoroka ny tsy fahampiana rano.
Ity karazana voankazo ity koa dia misy karazana vitamina, mineraly ary antioksidanera isan-karazany.
Ny anarana hafa an'ny cantaloupe dia misy muskmelon, mush melon, rock melon, ary Persian melon. Mpikambana ao amin'ny fianakavian'i Cucurbitaceae izy ireo, miaraka amin'ny melona, ​​pasteky, ary kôkômbra.
Ny rano, antioxidant, vitamina ary mineraly ao amin'ny cantaloupe dia afaka manome tombontsoa ara-pahasalamana isan-karazany.
Ny antioxidants, ohatra, dia afaka manampy amin'ny fisorohana ny fahasimban'ny sela izay mety hiteraka homamiadana sy aretina hafa.
Mandritra ny metabolisma, ny vatana dia mamokatra molekiola tsy miovaova antsoina hoe radika malalaka, izay afaka manangona ao amin'ny vatana sy manimba ireo sela. Ity fahavoazana ity dia fantatra amin'ny hoe adin-tsaina oxidative. Antioxidants manampy amin'ny fanesorana radika maimaim-poana amin'ny vatana ary hisorohana ny adin-tsaina.
Cantaloupe maina efa lafo vidy indrindra, Cantaloupe tsy ampy rano, Manome voninahitra ny tenanay izahay amin'ny maha-orinasa misy ekipa matihanina matanjaka izay manavao sy manana traikefa tsara amin'ny varotra iraisam-pirenena, fampandrosoana sy fandrosoana eo amin'ny vokatra. Ankoatr'izay, ny orinasa dia mitoetra tsy manam-paharoa amin'ireo mpifaninana aminy noho ny fari-pahaizana avo lenta amin'ny kalitaon'ny famokarana, ary ny fahombiazany sy ny fahaizany manohana ny orinasa.
"Miorina amin'ny tsena anatiny ary manitatra ny orinasa any ivelany" no paikadim-pampandrosoana ho an'ny sinoa tsara indrindra mivarotra voankazo tropikaly voajanahary voadio Cantaloupe Slice, efa niambina mialoha izahay hanangana fikambananan'ny orinasa kely maharitra miaraka aminao.
Teo aloha: frezy
Manaraka: Voasary Mandarin
Cantaloupe tsy ampy rano
Heritage Food dia miorina mifanaraka amin'ny fenitra GMP sakafo. Heritage dia atrikasa famokarana voankazo maina ankehitriny.